musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Lucas Digne Mwana Wevacheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita "Luca". Yedu Lucas Digne Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kwacho kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki - zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve kugona kwake kushungurudza vapambi kuti vabatise zvinhu. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaLucas Digne's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kuruboshwe-kumashure Lucas Digne akaberekwa pazuva re20th raJuly 1993 kuMeaux commune muFrance. Iye aive wechipiri wevana vaviri akazvarwa kuna amai vake, Karine Digne uye kuna baba vake, Philippe Digne.
Lucas Digne akaberekerwa vabereki vanozivikanwa zvishoma nezvake. Image Chikwereti: Francefootball.
Nyika yechiFrench inova yechibereko chevatambi vechizvarwa chena ane midzi yakajeka akakurira kuMeaux kuFrance uko akakurira pamwe nemukoma wake - Mathieu Digne.
Lucas Digne akarererwa kuMeaux commune muFrance. Image Chikwereti: Francefootball uye WorldAtlas.
Kukurira kunzvimbo yake yekuzvarwa kuMeaux France, Digne akatsika nzira dzehama yake mukuru Mathieu nekutamba nhabvu pazera nyoro kwazvo. Digne paakange arimo, aingoerekana audza chero munhu aifarira kuteerera kuti aizove nyanzvi mumutambo uye ane hunhu hwakakwana hwekudzora pfungwa yake.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Sezvo mudiki Digne akasimudzira murefu uye zera, zvaaifarira mubhola zvakava chinhu chakawandisa. Neraki, kunyoreswa kunharaunda yekirabhu Mareuil-Sur-Ourcq kwakamupa nzvimbo yakaringana yekuona nhabvu inokwikwidza uye zvinonyanya kukosha, kurira pasi rhetorics yake nezvekuva nyanzvi.
Panguva iyo Digne akange ave zera 9 mu2002, akabatana nekirabhu yakavakidzana, Crepy-en-Valois kwaasina kungochinjisa pane hunyanzvi hwakawanikwa kubva kumakore 3 ekudzidziswa paMareuil-Sur-Ourcq asi akaramba akavhurika kuti adzidze zvimwe zvinosimbisa.
Lucas Digne kadhi rekuzivikanwa kuCrepy-en-Valois. Image Chikwereti: Francefootball.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Pamusoro pekutamba kwaDigne nhabvu inosangana neCrepy-en-Valois, akave akaomesera kuregera sezvo bvudzi rake rakapenya rikava imwe mhando yemucherechedzo yakaita kuti scout kubva kuLille atore nzvimbo yake inonakidza panguva yemakwikwi.
Nekudaro, 12-gore-makore-bhora renhabvurodigy yakaunzwa kune yechidiki system yeLille uko akasimuka kuburikidza nemazita mune akatevera 5 makore ekupedzisira akazochengetedza kukwidziridzwa kuchikwata chechikwata chekutanga. Akaenderera mberi kusaina kontrakita yake yekutanga inyanzvi neFrance side munaJuly 2010.
Lucas Digne achitamba Lille inyanzvi. Mufananidzo Chikwereti: FMS.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
KwaDigne, Lille yakanga isiri inzvimbo yekubereka sezvaakanyanya kutarisa kuzadzisa kwake kurota kwehucheche kwekutamba kweParis Saint Germain. Iko kusimudzira kunotsanangura kufamba kwake kuchimbichimbi ku "kirabhu kirabhu" mu2013 apedza mwaka miviri kuLille.
PSG yakasaina Lucas Digne kubva kuLille mu2013. Image Chikwereti: Sportskeeda.
Ndichiri kuPSG, Digne aiita sekunge akagadzwa kuti apfuure nguva pamabhenji. Haana kumbowana mukana wekuzvisimbisa pakirabhu iyo yaakaitwa mutambi-wekusvikira paakasvika akajaira kuve munhu asina kushandisa chinzvimbo mumitambo yake mikuru yekurota. Kuti abate zvese, akapihwa chikwereti kuRomani mumwaka we2015 / 2016 mushure mekupedza makore maviri chete nemaParisians.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Kunyangwe hazvo Digne akapedza gore chete ari kuRomani, kutaridzika kwake sekirabhu kwakapfuura zvaakanyora kuPSG mumwaka miviri, uye haana kutariswa senge ari kuBarcelona kwaakambotamira ku2016 uye akapedza mwaka miviri achitamba pamwe chete nemahara emitambo sebhola Lionel Messi.
Nekukurumidza kusvika ikozvino, Digne anotamba kuOverton FC mushure mekusaina kukirabhu mu2018. Iye pasina panikiro anofara parutivi rweChirungu paakarekodha huwandu hwechinangwa mune rake basa panguva yekunyora. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lucas Digne ari muchinangwa chakanaka chekupa fomu kuOnton. Image Chikwereti: Thewest.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Kusimuka kwaDigne kuburikidza nehuwandu hweLille kunoramba kuchinetsa kwaari mumakore mazhinji, kunyanya nekuda kwekuti akasangana nemusikana - Tiziri Digne panguva iyi. Varidzi verudo avo vaive vaviri 16 makore panguva yemusangano wavo wekutanga, vakava vaviri vasingagadzirisike uye vakapfuurira kuroora munaDecember 2014.
Lucas Digne nemukadzi wake vakatanga sevechidiki vechidiki. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Tziri iri pakati pezvimwe zvinhu fitness uye fashoni inofarira uyo anotarisira kuvaka basa mune utori venhau. Iye achangobva kubereka mwana wavo wekutanga (mwanakomana) muna Kubvumbi 2019 kuendesa mhuri munyika izere nyowani.
Digne naTiziri vakava nemwana wavo wekutanga pamwechete muna Kubvumbi 2019. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Kure kubva kumateki akaomeswa, kuvhara makaini uye kuchenesa bhora maTofu, mhuri yakakosha kuna Digne. Tinokufamba iwe kuburikidza nehupenyu hwake hwemhuri.
About Lucas Digne baba: Philippe ndibaba vaDigne. Akashanda muimba yekudhinda kuLizy-Sur-Ourcq padhuze neMeaux panguva yehupenyu hwaDigne achiri mudiki uye akatamba zvekare kune timu yekutanga yekuruboshwe's boy boy club Mareuil-Sur-Ocrcq. Izvo hazvitauri kuti akabatsira zvikuru mukugadzira kusimuka kwaDigne munhabvu uye akaridza zvikamu zvakakosha mukukura kwake kusvika zvino.
About Lucas Digne amai: Karine ndiamai vaDigne. Kufanana nemurume wake nevanakomana, iye akakura pane bhora uye akamboshanda semunyori weDigne's chikomana kirabhu Mareuil-Sur-Ocrcq. Amai vane rudo vevaviri vanochengeta padyo nebhutsu kuvanakomana vavo kunyanya Digne uyo achangounza kumba muzukuru wavo achangoburwa.
Lucas Digne akarerwa nevabereki vanozivikanwa zvishoma nezvake. Mufananidzo Credits: ClipArtStation uye FotballWikia.
About Lucas Digne siblings: Digne ane hama inozivikanwa saMathieu. Mukoma mukuru anogovera nyaya imwecheteyo yehudiki naDigne zvakare aive nebasa rake rekuvaka kuLille asi haana kutendeuka. Nekudaro, haamboregi kutsigira Digne akazvipira kuita zita rakanaka kumhuri mubhora-yepamusoro nhabvu.
About Lucas Digne hama: Digne ane vanatezvara nevatezvara nasekuru vake avo vasingazivikanwe hazvo paine zvinyorwa zvevabamunini vake, babamunini nababamunini nababamunini. Saizvozvo, vazukuru vemashure vekumashure havasati vachifanira kuzivikanwa kunyanya muzviitiko zvehupenyu hwake hwepakutanga kusvika nhasi.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Ehe, Digne ane kutarisa kukuru kuti court court, iko hunhu hwake hunotora moyo weavo wese anenge asangana naye. Hunhu hweDigne's inodakadza Persona iyo inotora mavambo kubva kuCancer zodiac chiratidzo inosanganisira yake yekuzvarwa kwechinangwa, kuratidzwa kwehungwaru hwepfungwa uye kusimba kusimba.
Zvaanofarira uye zvaari kuita zvinosanganisira kuona, kuteerera mimhanzi kunyanya R&B uye Rap. Digne zvakare inoenderera nemitambo yetennis uye basketball pamwe nekushandisa nguva yakanaka nemhuri uye neshamwari.
Kuona ndeimwe yezvido zvaLucas Digne. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Mutengo unokosha we € 30 mamirioni panguva yekunyora pamwe neyemakore gumi emakore ehunyanzvi nhabvu yakasimbisa Digne mumakwikwi evashandi vanogamuchira mari yakawanda vane zvinoshamisa mambure akakosha.
Anorarama hupenyu hwoumbozha hunogara hunowonekwa munzira yake yekushandisa mari, dzimba pamwe nekunakirwa kwekunogara pekugara kana achitamba kunze kwechiFrench League. Zvimwe inonyanya kufadza ndeyekutora kwake mota dzinotengeswa nemhando dzakaita saFerrari, Mercedes uye Audi.
Lucas Digne posging padivi peimwe yeavo Audi akatasva. Mufananidzo Wemifananidzo: Wtfoot.
Lucas Digne Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kufunga uye kuziva hakuna kufanana. Ndapota tsvaga pazasi asinganyatso-kuzivikanwa kana asina kutaurwa chokwadi nezvaLucas Digne.
Kusvuta uye Kunwa: Digne haana nhoroondo nefodya, kana kupiwa kunwa panguva yekunyora. Panzvimbo pezvo anovavarira kuva noutano hwakanaka uye kupfeka chero chinhu chinogona kudzikisira kuita kwake.
Tattoos: Ane akatanhamara matato pamaoko ake uye ane nharo mazwi (Ini Handimbofi Ndofamba Ndoga ') pachipfuva chake chakambofungidzirwa kuva rudo rwake neLiverpool. Achiisa rekodhi zvakananga pane iyo nyaya, Digne akatsanangura kuti chaive mutero kuvabereki vake.
Tattoo ya chest yaLucas Digne inoti "handifi ndakafamba ndega". Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kuzvipira Kwenyika Dzese: Iyo kuruboshwe-kumashure inoridza timu yenyika yeFrance uye yakamiririra mativi ese anoumba U16 kusvika kuU21 mazinga. Akaridzira France panguva yemukombe wepasi rose we2014 uye aive akamira achitungamira timu yeFrance ku2018 FIFA world cup.
Chitendero: Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pechinzvimbo chaDigne pazvinhu zvekutenda, zvakadaro, anopa inkling yekuve mutendi nekuzviyambutsa iye pachavo pamunda wekutamba. Maitiro akadaro anofarirwa pakati pevaKristu kunyanya vaKatorike.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu yaLucas Digne Yehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.